भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत ह’त्या भएको हो ? परिवार र प्रहरीको बेग्ला बेग्लै खुलासा — Imandarmedia.com
भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत ह’त्या भएको हो ? परिवार र प्रहरीको बेग्ला बेग्लै खुलासा
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आ’त्मह’त्या गरेको नभई उनको ह’त्या भएको आशंकासहित परिवारजनले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् ।
मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा आइतबार झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका राजपुतले आत्महत्या गरेको बताइरहँदा परिवारजनले भने हत्याको आशंका गर्दै निष्पक्ष छानविनका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
राजपुतले आत्महत्या गरे भन्ने विश्वास नरहेको बताउँदै मामा आरसी सिंहले घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुरोध गरेका हुन् । प्रहरीले भने घटनाको प्रकृतिले अहिलेसम्म ह’त्या भएको बताउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ ।
उनले सन् २०१६ मा ‘एम एस ध्वनी’ चलचित्रबाट बेस्ट याक्टर अवार्ड पाएका थिए । उनले यस अवार्ड पाउने क्रममा भनेका थिए ः “मैले यो सफलता हासिल गर्दै गर्दा मैले मेरो आमालाई सम्झिरेको छु । कास यदि मेरो आमा अहिले यहाँ हुनुभएको भए कति खुशी हुनुहन्थ्यो होला, म अहिले जे छु उहाँकै कारणले छु”
व्यवसायिक र समीक्षक दुवैको नजरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्न सफल यो फिल्मले आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने सन्देश बोकेको छ। तर विडम्बना छोरालाई आशावादी बनाउने चरित्र निर्वाह गरेका उनै सुशान्तले आ’त्मह’त्याको बाटो रोजे। पर्दाभित्रको चरित्र र वास्तविक जीवनबीच कस्तो ननिको विरोधाभास